Geesigii xalay lugtiisa ku soo saaray Tottenham oo hadlay iyo Eriksen oo soo jeediyay in Taalo loo dhiso – Gool FM
(England) 09 Maajo 2019. Lucas Moura ayaa baal dahabi ah ka galay taariikhda kooxda Tottenham kaddib markii uu suuro galiyay inay markii ugu horreysay taariikhda soo hiigsato Final ka tartanka Champions League.
Spurs oo 2-gool lagu hogaaminayo qeybta hore ee kulankii xalay ka dhacay gegada Johan Cruijff ArenA oo ay u dheer tahay in lugtii horena 1-0 looga soo adkaaday ayaa waxaa qeybta labaad dhacday mucjiso.
26-jirka reer Brazil ayaa saddexleey ka kacay si ay Tottenham kulanka u adkaato uguna soo gudubto finalka, Laacibka oo ciyaarta kaddib hadlay ayaana sheegay inay suuro gal ahayn inuu sharaxaad ka bixiyo sida uu yahay dareenkiisa waqti xaadirkan, halka saaxiibkii Eriksen uu soo jeediyay in Taalo loo dhiso.
“Suuro gal ma aha inaan sharaxaad ka bixiyo sida aan dareemayo waqti xaadirkan,” Moura ayaa sidaa u sheegay BT Sport.
“Aad baan u faraxsanahay, aad baan ugu farxsanahay saaxiibadeyda kooxda. Waan aaminsaneyn inay suuro gal tahay inaan u soo gudubno Final ka, garoonka ayaana ku bixinay wax kasta. Waxaan aaminsanahay inaan u qalannay midan, qoys ayaynu nahay.
“Suuro gal ma aha inaan sharaxaad ka bixiyo dareenkeyga, aad ayaan u faraxsanahay waa hadiyad wayn oo ilaah ka timid, waxaan jeclaan lahaa inaan la qeybsado saaxiibadeyda kooxda iyo taageerayaasha.”.